Waldaan Ogeessota Fiilmii fi Aartii Oromoo Hundeeffame
Date: July 13, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 14 Adoolessa 2015) Waldaan Ogeessota Aartii fi Fiilmii Oromoo Finfinnee Gidduugala Aadaa Oromootti hundeeffame.
Oduun Finfinnee irraa bubbulee nu gahe akka ibsutti, sagantaa Caamsaa 16 bara 2015 kan artistoonni Oromoofi keessummoonni waamichi taasifameef irratti waldaan ogeessoota aartii 60n hundeeffameera.
Akka gabaasaan Oromedia hubachiisetti, guyyaan waldaan aartistoota Oromoo itti hudneeffame kun aartistoota Oromoof guyyaa guddaa ture; guyyaa hawwiinsaanii yeroo dheeraa booddee itti milkaa’eefi tokkummaan isaanii itti cime, aartiin Oromoo imala haarawaa itti jalqabe ture.
Hundeeffamuun Waldaa Fiilmiifi Tiyaatira Oromoo (WFTO) yeroo dheeraaf hawwii guddaadhaan eegamaa ture guyyaa itti dhugoome kana, sirbawwaniifi kilaasikaaliiwwan Baandiin Biiftuu Oromiyaa dhiheesseen miidhagee ture.
Dura Ta’aan WFTO, artiisti Qaroo Taammanaa keessummoota saganticharratti argamaniin “Anaa haa dhufu” erga jedheen booda haasawaa taasiseen, eenyummaan Oromoo sirna gita bittaa mootummoota abbaa irree biyyattiitiin dhiibbaa irra ga’aa akka ture dubbateera. Dhiibbaadhuma kanaan afaan, aadaafi duudhaan ummatichaa jaarraa tokkoo oliif qucaree akka ture ibseera.
Sirnoota darban keessa Oromoon akka lammii lammaffaatti ilaalamuun mirgaafi eenyummaasaa sarbamuun aadaan, afaaniifi seenaansaa akka hindagaagne dhiibbaa guddaan irra turullee sabboontoonni qabsoo ilmaan Oromoo sirbaan, barreeffamaafi karaa addaddaatiin eenyummaa sabichaa deebisuuf gumaacha taasisan seenaan hindagatu jedha.
Akka ibsa dura taa’ichaatti, waggoottan kurnan lamaan darbanitti, barreessitoonni, qopheessitoonniifi taateewwan hedduu indastirii aartiitti makamaniiru. Kana keessatti yaaliisaan taasisan gaarii ta’uus ammayyuu aramaan indastirichaa buqqa’ee akka waan hindhumiiniif ammas aartiin Oromoo akkaataa barbaadamuun bifaafi gosaan hamma guddachuu qabu akka hinguddanne addeessa. Kunis ta’uu kan danda’e, xiyyeeffannaa mootummaan damichaaf kenne gahaa ta’u dhabuu, abbootiin qabeenyaa tumsa barbaachisu taasisuu dhiisuufi hubannoon ummanni aartiif qabu gadaanaa ta’uu ibseera.
WFTOnis rakkoowwan gama indastirii aartii mul’atan tokkummaan hiikuun afaan, aadaafi duudhaa Oromoo dagaagsuuf warraqsa imala haaraa eegaluuf kan dhaabbate ta’uu Artisti Qaroon himee, kanaafis mootummaan, abbootiin qabeenyaafi hawaasni waldicha cinaa akka dhaabatu waamichasaa dabarseera.
Ittigaafatamaa Ittaanaan Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Obbo Shallamaa Imaanaa gamasaaniin akka jedhanitti, sirnoota darban keessa walqixxummaan ummattootaa osoo hinmirkanaa’iin sirni atseewwanii walitti darbaa dhufe aadaan, seenaafi eenyummaa Oromoo isa bareedaarratti awwaala ka’ee darbus, qabsoo waggoota 20 ol lakkofsiiseen har’a haalli mijataa uumamuusaatiin dhalataan Oromoo jajjabaachuun aartiisaa dagaagsuuf socho’uu qaba.
Aartiin Oromoo hamma barbaadameefi hawwamee bira ga’amuu baatuus yeroo dhihoo as xiyyeeffannaa olaanaan seekatarichaaf kennamuu eegaluusaa eeranii, akka fakkeenyaattis qorannaa, aadaan, seenaafi aartiin Oromoo akka dagaaguuf mootummaaan giddugalaa aadaa ijaarsise keessatti wiirtuulee addaddaa banamuun ummataaf dabarsuunsaa kana kan mirkaneessa jedhu. Darbees mana barumsaa aartii ijaaruuf dhagaan bu’uuraa mooricha keessatti ka’amees kanuma kan dhugoomsu ta’uus addeessu.
Kana malees aartiistoota Oromoo waggoota dheeraaf aartii sabichaa guddisuuf carraaqaa turan hangafootaafi ammaan tana rakkoo hawaasummaarratti argaman deggaraa jiraachuunsaas xiyyeeffannoo damee kanaaf kenne kan mul’isu ta’uu himanii, kanaa boodas sochii WFTOn aartiicha guddisuuf taasiuuf deggarsi barbaachisu kan itti fufu ta’uu Obbo Shallamaan ni dubbatu.
Artisti Tasammaa Galataas hundaa’uun waldichaa fiigicha qofa qofaa kanaan dura ture hambiisuudhaan tokkummaan waliin hojjechuu kan dandeesisu akka ta’e dubabte. “Kanaan booda aartiistoonni Oromoo gareedhaan ijaaramuun aartii Oromoo guddisuu danda’; rakkoosaaniis kan hiiku walduma kana ta’a.”
Previous Previous post: Finfinneetti Dhiyeessiin Foonii Dhabame; Qeeraanis Waraannis Tigireen Hogganam.
Next Next post: Guyyaan Finfinnee: Adoolessi 13- Finfinnee fi Naannoo Ishiitti Kabajame.